‘धनपति’ अफिसियल ट्रेलर रिलिज : यस्तो छ सिनोप्सीस
By Bisnu Sharma on	 26th May 2017 ट्रेलर, समाचार
खगेन्द्र लामिछाने र दीपेन्द्र के. खनालको टीमअपमा बनेको ‘पशुपति प्रसाद’ले व्यवसायिक र समिक्षा दुबै हिसाबमा सफलता पायो । यी दुईजनाले सहकार्य गरेको सिनेमा ‘धनपति’लाई समेत बक्सअफिसमा प्रतीक्षित मानिएको छ ।
टुकी आर्ट्स र दीपेन्द्र के. खनाल प्रोडक्सनद्धारा निर्मित दोस्रो सिनेमा धनपतिको ट्रेलर शुक्रबार रिलिज भएको छ । सुरक्षा पन्त, आशान्त शर्मा, मनिष निरौला, सुरभी बर्तौंला, हरिहर शर्मा, रवि गिरी, कमल देवकोटा लगायतको अभिनय छ ।
दलहरुले राजनीतिक आन्दोलनमा कसरी सर्वसाधारणलाई प्रयोग गर्छन् भन्ने कथा पेश फिल्मले पेश गर्छ । आयोजित प्रेसमिटमा फिल्मको संक्षेप कथानक समेत सार्वजनिक गरियो । राजनीतिक विरासत बोकेको सानाकाजी अर्थात धनपति द्धन्द्धको चपेटामा परी पूर्व तराईबाट राजधानी आउँछ ।
गर्जो टार्नका लागि सानो रेष्टुरेन्टमा काम गर्ने बाहेक ऊसँग अन्य स्रोत छैन । इमान बेच्न नचाहने स्वाभिमानी उसको स्वभाव छ । छोरीलाई बोर्डिङ स्कुलमा पढाउन चाहन्छ । फिल्मको मुख्य पात्र धनपति के सहरमा स्वाभिमानको जिन्दगी बाँच्न पाउला ?
खगेन्द्र लिखित अघिल्लो कथासंग्रह फुलानीबाट धनपति लेखिएको हो । निर्देशक खनालले दर्शकसँग बसेर फिल्म हेर्न आफू आतुर भएको बताए । अभिनेता लामिछानेले आफूलाई दर्शकले बोलाउने नाममा धनपति थपिने विश्वास लिए ।
असार २३ मा सिनेमा रिलिज हुँदैछ ।